Wasaarada Cafimaadka oo shaacisay in Soomalida laga talaalaayo Cudurka Karoonaha | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasaarada Cafimaadka oo shaacisay in Soomalida laga talaalaayo Cudurka Karoonaha
Wasaarada Cafimaadka oo shaacisay in Soomalida laga talaalaayo Cudurka Karoonaha
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in Tallaalka Caabuqa Coronavirus-ka ay gaarsiiso guud ahaan dalka, iyadoo Qeybta ugu horreeysa tallaalka dalka lakeeno doono bishan aan ku jirno ee febraayo 2021.
Ujeedada waxay tahay in dadka soomaaliyeed laga tallaalo xanuunka karoonaha ayadoo tallaalka uu yeelan doono wajiyo kala duwan, sida ku cad qodobada hoose:
Shaqaalaha Safka hore: waxa Talaalka qaadan doona Dhammaan shaqaalaha Caafimaad ee ka hawlgala xarumaha guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay, shaqaalaha ku sugan Marinada lagsoo galo dalka sida koontaroollada Xuddudaha dalka, garoomada diyaaradaha, dekedaha iyo wadooyinka laga galo magaalooyinka, shaqaalaha dowladaha hoose ee sida maalinlaha ah ula falgala dadka ay u adeegayaan iyo macallimiinta.
Dadka da’da ah (50jir iyo wixii ka weyn)
Dadka sida gaarka ah ula tacaala xanuunada ee qaba xanuunada hoos u dhiga difaaca jirka ama si joogto ah ula nool xanuunada
Nooca Tallaalka ee Soomaaliya la keenayo ayaa ah AstraZeneca/Oxford vaccine qiyaasta wajiga hore la heli doono ayaa ah 1,224,000. Tallaalkan waxaa lagu keydin karaa heer kulul u dhaxeeya (2-8) cabbirka heer kulka ee degree centigrade taasoo macnaheedu yahay in lagu kaydin karo habka qaboojiyaha tallaalada ee dalkeennu leeyahay.
Wasaaradda Caafimaadka ayadoo si dhow ula shaqeyneysa hay’adaha WHO, UNICEF iyo Hay’adaha kale ee Caafimaadka kala shaqeeya waxay sida ugu dhaqsiyaha badan u billaabi doontaa Bixinta tallaalka COVID-19 isla marka ay timaado qeybta ugu horreeysa ee tallaalka.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay mudnaanta siisay diyaarinta habraacyada iyo Istaraatiijiyadda Tallaalka ayadoo kaashanaysa Hay’adaha bahwadaagta la’ah taasoo awood u siin doonta marka ugu horreysa inay tallaalka qataan shaqaalaha safka hore iyo dadka lanool cudurada halista u ah.
Guud ahaan tirade guud ee tallaalka la gaarsiin doono waa 3,000,000 (saddex milyan) oo qof, tiradaas oo si gaar ah looga tallaali doono xanuunka coronavirus. Qabashada ololayaasha dalka wuxuu uleeyahay qibrad maadama sanadihii hore la qaban jiray ololayaal kala duwan sida Dabeysha iyo jadeecada, isagoo dalku uu ka faaiidaysan doono khibraddaas aan mudada dheer u leenahay qabashada ololayaasha, waxaa inoo sahlanaan doonto bixinta tallaalka COVID-19.
Guddiga Qaran ee ka shaqeynta tallaalka COVID-19 ee la Sameeyey bishii November ee sanadkii tagay 2020 waxay gundhig u ahaayeen dhisidda iyo billaabidda maamulka ama Hay’adda Hay’adda Qaran ee maamusha Daawada iyo Tallaalada Qaranka ee kumeel gaarka ah si ay u qiimeyso oo u kormeerto shuruucda Isticmaalka , Tayada iyo badqabka tallaalka.
Somaaliya illaa iyo hadda waxay xaqjiisay helidda tallaal ku filan 20% dhamaan Bulshada, taasoo dabooli doonta inta badan dadka nugul ee aan kor kusoo sheegnay. Dowladdu waxey ku dadalaysaa sidii dhaqaale kale loogu heli lahaay in dhamaan bulshada hesho Talaalka.
Previous articleShacab dagan agagaarka Villa Soomaaliya oo arrin la yaab leh ka cabanaya
Next articleDowlada Federaalka oo u jawaabtay Midoowga Musharaxiinta
. Markab dagaal oo ay leeyihiin Ciiddanka Ilaalada Kacaanka Iiraan ee IRGC ayaa shalay lagu qarxiyey Badda Cas, gaar ahaan inta u dhexeysa Xeebaha Yemen...
Axmed Madoobe oo ka Tacsiyeeyay Geeridii ku timid Hanti...
Dowlada Federaalka oo u jawaabtay Midoowga Musharaxiinta
MacKenzie Scott, oo uu qabi jiray ninka ugu tajirsan addunka oo...